“ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး”မရှိဟုဆိုလျှင် “ရခိုင်လူမျိုး”၊“ဗမာလူမျိုး”လည်းမရှိ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
တဇောက်ကန်းတိရစ္ဆာန်သင်းကွပ်ဆရာကြီးဦးအေးမောင်၊ ဖြီးဖြန်းဆရာကြီးဦးအေးချမ်းတို့ရခိုင်အုပ်စုက “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသည်မှာသမိုင်းမှာမရှိ၊၊ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုဇွတ်တရွတ်ပြောလျက်ရှိသည်။ထိုအစွန်းရောက်များ၏လေသံကိုလိုက်၍ “သူများယောင်လို့ယောင်အမောင်တောင်မှန်းမြောက်မှန်းမသိ” သည့်ဦးသိန်းဋ္ဌေး၊ဦးခင်ရီစသောမြန်မာအာဏာပိုင်တို့ကလည်း “ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမြန်မာပြည်မှာမရှိဘူး၊တိုင်းရင်းသားလူမျိုး(၁၃၅)မျိုးထဲမှာဘယ်တုန်းကမှမပါခဲ့ဘူး။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တာမှာလဲမပါဘူး” ဟုမြည်တွန်တောက်တီးလျက်ရှိကြသည်။ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဆိုသူတစ်ဦးကဆိုလျှင်ကုလသမဂ္ဂအထိ် တက်ပြီးရိုဟင်ဂျာမရှိဟုမှင်သေသေဗြောင်လိမ်သည်။ အဆိုးဆုံးကားသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပင် တိရစ္ဆာန် သင်းကွပ်ဆရာကြီးဦးအေးမောင်၏မှိုင်းမိနေခြင်းဖြစ်သည်။
“ရိုဟင်ဂျာ”သည်မြန်မာအင်ပါယာတွင်ရှိခဲ့သည်ဟု ၁၇၉၉ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သောFrancis Buchanan ၏ သုတေသနမှတ်တမ်းတွင်ပါရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်သည့်ဦးနုအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ များ၏အတည်ပြုခွင့်ပြုချက်မရဘဲ “သေးသေးတင်“ တစ်လုံးပင်အပို၊ အလိုမရှိရသည့်စာအုပ်စာတမ်း၊စာနယ်ဇင်းများကရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်သည်ဟု အပ်ကြောင်းထပ်အောင်ဖော်ပြခဲ့ ကြောင်း၊ သေနတ်တကားကားနှင့်စစ်သားများ (၂၄) နာရီပတ်လုံးအထူးစောင့်ကြပ်သောမြန်မာအစိုးရပိုင် “မြန်မာ့အသံ”လွှင့်ရုံမှ“ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဘာသာ”ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလွှင့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းစသည်တို့ကိုသမိုင်းပညာရှင်များ၊ ဆောင်းပါးရှင်များ၊နိုင်ငံရေးသမားများကအထောက်အထားများခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြင့် ရေးသားတင်ပြပြောဆိုကြသော်လည်း အေးမောင်၊ အေးချမ်း၊ သိန်းဋ္ဌေး၊ ခင်ရီတို့အုပ်စုကမျက်စိများကန်း၊နားများပင်း၊ ဦးခေါင်းခွံထဲဦးနှောက်များမရှိဘဲနွားချေးများထည့်ထားသလားဟုထင်ရလောက်အောင် လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသည့်ပမာထင်ရှားနေသည့်အထောက်များကိုမြင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ“ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးချည်း” အော်မြည်လျက်ရှိသည်။ ဧကန္တမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းများကိုစုံအောင် မဖတ်ဖူးသောဗဟုသုတခေါင်းပါးလွန်းသူများဖြစ်ရပေမည်။ သို့မဟုတ်သူတော်ချင်းချင်းသီးတင်းလွေ့လွေ့ ပေါင်းဖက်တွေ့ပြီးမြန်မာသင်ပုန်းကြီးမကျေသူများချင်းညီ၍ “ဤ” ကို “ကျွဲ” ဟုဖတ်နေသူများဖြစ်ရပေမည်။
ဤအသိခေါင်ခက်အ၀င်နက်သောခွေးမြီးကောက်များတွင်စွဲကပ်နေသော “ရိုဟင်ဂျာမရှိ” စိတ်စွဲရောဂါ (Obsession) ပျောက်ကင်း၍ုမြန်မာပြည်မှာရိုဟင်ဂျာရှိကြောင်းမြင်နိုင်စေခြင်းငှာ အခြားကုထုံးတစ်ခုဖြင့် ကျွန်တော်ကုစားကြည့်ချင်သည်။ ကျွန်တော့်နည်းကားသမိုင်းအထောက်အထားများကိုရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရေးသားရှင်းပြသည့်နည်းမဟုတ်ဘဲ “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိဘူး”၊ချည်းဟု “ဘူး” တစ်လုံးဆောင်နေသူများကို လူ့သမိုင်းတွင်လူမျိုးပေါ်ပေါက်လာပုံသဘောတရားကိုကျိုးကြောင်းဆက်စပ်ပြနည်း (ယုတ္တိဗေဒနည်း) ဖြင့်ရှင်းပြမည့်နည်းဖြစ်သည်။ ထို “ဘူးကွယ်” နေသူများ၏ဦးနှောက်များသည် “တင်ကြိုစီမံထားချက်များ” နှင့်ပြည့်နှက်မနေဘဲ ၎င်းတို့၌လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တတ်သည့်နှမ်းတစ်စေ့မျှဥာဏ်ကလေးရှိခဲ့လျှင်မ “ဘူး” တော့ဘဲမြန်မာပြည်မှာရိုဟင်ဂျာရှိကြောင်းမြင်နိုင်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိသည်။
ဦးစွာထို “ဘူး” သမားများကိုမေးခွန်းအချို့ကိုမေးလိုက်ဦးမည်။ကျွန်ုပ်တို့နေစကြ၀ဠာကြီးမှလူသားတို့နေ ထိုင်သောကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာနှစ်ပေါင်းမည်ရှိပြီနည်း။ ထိုကမ္ဘာဂြိုလ်ကြီးပေါ်တွင်လူသားဟူ၍ ပေါ်လာသည်မှာနှစ်ပေါင်းမည်ရှိပြီနည်း။ ကမ္ဘာဂြိုလ်ကြီးပေါ်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဟိုလူမျိုး၊ သည်လူမျိုး ဟူ၍ပေါ်ခဲ့သလော။ လူ့သမိုင်းသည်မည်သည့်အချိန်ကစတင်ခဲ့သနည်း။ ဗမာလူမျိုး၊ ရခိုင်လူမျိုးများသည် ကမ္ဘာဦးကာလကပင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောလူမျိုးများဖြစ်ပေသလော။ ၎င်းလူမျိုးများ၏ကျောများပေါ်တွင်မိခင် ၀မ်းဗိုက်ကထွက်ကျလာကတည်းကဗမာလူမျိုး၊ရခိုင်လူမျိုးဟူ၍ရေးသားပါလာခဲ့လေသလော။ ဗမာလူမျိုး၊ ရခိုင်လူမျိုးများပေါ်လာပြိးနောက်ပိုင်းတွင်ကမ္ဘာကြီးပျက်သည့်တိုင် နောက်ထပ်မည်သည့်လူမျိုးသစ်များ မပေါ်ပေါက်ရပေဘူးလော။ လူ့သမိုင်းတွင်လူမျိုးများဖြစ်ပေါ်လာပုံသဘောတရားမည်သို့ရှိသနည်း။
လွန်ခဲ့သောနှစ်(၁၃.၇)ဘီလီယံခန့်ကဆိုလျှင်မည်သည့်အရာမျှမရှိပါ။ မဟာစကြ၀ဠာလည်းမရှိ၊ နေစကြာ ၀ဠာလည်းမရှိ၊ ကမ္ဘာဂြိုလ်ကြီးလည်းမရှိ၊ လူသားလည်းမရှိ၊ အင်္ဂလိပ်လည်းမရှိ၊ ဗမာလည်းမရှိ၊ ရခိုင် လည်းမရှိ၊ ရိုဟင်ဂျာလည်းမရှိ။ ဘယ်လူမျိုး၊ဘယ်အရာမျှမရှိပါ။ နောက်မဟာပေါက်ကွဲမှု (Big Bang) ကြီးဖြစ်ပြီးနောက်လွန်ခဲ့သော(၄.၄၅) ဘီလီယံခန့်ကမှကမ္ဘာဂြိုလ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော (၂၅၀၀၀၀) ခန့်ကမှယနေ့လူသားများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ် (၅၀၀၀၀) ခန့်ကမှသာဗဟို အာရှသို့ယနေ့လူသားများရောက်ကာစသာရှိသေးသည်။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံဟုအမည်ပေါက်နေသောဒေသ တွင်ထိုလွန်ခဲ့သောနှစ်(၅၀၀၀၀)ခန့်ကဆိုလျှင်လူသူဟူ၍ပင်မရှိသေး။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာဂြိုလ်ကြီးပေါ်လာ သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်လူသားဟူ၍ပင်မရှိသေးပါ။ ဟိုလူမျိုး၊သည်လူမျိုးဟူ၍လည်းမကွဲပြားသေးပါ။ ကမ္ဘာဦး ကာလလူဟူ၍စတင်ပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင်လူသားသာရှိပြီးလူမျိုးဟူ၍လုံးဝမရှိ။ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ မွန်၊ ကရင်၊ ကိုးကန့်၊ ၀၊ ဘင်္ဂလီ၊ ကမန်စသည့်နာမည်များဖြင့်လူမျိုးများလည်းမရှိ။ ဗမာ၊ ရခိုင်၊လူမျိုးများသည်လည်း်ကျောကုန်းပေါ်၌ “ဗမာ”၊ “ရခိုင်” ဟူ၍ရေးသားပါရှိလျက်သူတို့၏မိခင်ဝမ်းဗိုက်များ ထဲကထွက်ကျလာခြင်းမရှိသေးပါ။ နောင်သောအခါလူများရေကြည်ရာမြက်နုရာသို့အုပ်စုကွဲနေထိုင်ရာမှ နေထိုင်ရာဒေသ၏ရေမြေဒေသပထဝီအခြေအနေကြောင့်အသားအရောင်၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ ဘာသာ စကား၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ဓလေ့ထုံးစံစသည်တို့ကွဲပြားခြားနားသော လူအုပ်စုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း သာဖြစ်သည်။
ဤသို့အုပ်စုအသီးသီးတွင်ထူးခြားသောအသွင်လက္ခဏာများ (သီးခြားယဉ်ကျေးမှုများ) ရှိလာသောအခါ လူမျိုးအသီးသီးပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ကိုးကန့်၊ ၀၊ ဒိုင်းနက် စသောလူမျိုးများသည် ဤသို့တမူထူးခြားသောအသွင်လက္ခဏာများ (သီးခြားယဉ်ကျေးမှုများ) ရှိလာရာမှမြန်မာ့သမိုင်း၏ အမှတ် တစ်နေရာစီတွင်ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်လူမျိုးသစ်များပေါ်ပေါက်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည် ရပ်တန့် နေသည်မဟုတ်ချေ။ မြန်မာတွင်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာတွင်လည်းကောင်းလူမျိုးသစ်များဆက်လက်ပေါ် ထွန်းနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ သိပံ္ပပညာရှင်များ၏အလိုအရနေစကြ၀ဠာကြီးသည်နောင်နှစ်ပေါင်းသန်းပေါင်း ၄၅၀၀ခန့်တည်ရှိဦးမည်ဟုဆိုသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးသည်နောင်နှစ်ပေါင်းသန်းပေါင်း များစွာဆက်လက်တည်ရှိမည့်သဘောဖြစ်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင်အထက်တွင်ပြဆိုသည့်အတိုင်းကမ္ဘာ တွင်နောင်လာလတံ္တ့သောကာလ၌လူမျိုးသစ်များပေါ်ထွန်းလာပေဦးမည်။ ဤသဘောအရလူမျိုးသစ် တစ်မျိုးသည်ယနေ့လည်းပေါ်နိုင်သလိုနက်ဖြန်သဘက်လည်းပေါ်နိုင်သည်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူမျိုးပေါင်း (၆၀၀၀) ခန့်ပေါ်ထွန်းပြီးဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ ဤအရေအတွက်သည် ရုတ်တရက်ဝါးကနဲပေါ်ပေါက်လာခြင်းမဟုတ်ပေ။ ရှေ့နောက်ပြု၍ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အစပထမတွင် ဘာလူမျိုးမျှမရှိ။ နောက်လူမျိုးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိလာသည်။ နောင်အချိန်တန်သောအခါအခြားလူမျိုးသစ် များပေါ်လာပြီးလူမျိုးအရေအတွက်တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကြားကာလတွင်အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် ပေါ်ပြီးသားလူမျိုးအချို့မျိုးတုံးသွားသည်လည်းရှိသေးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကမ္ဘာလူမျိုးအရေအတွက် ဤမျှသို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ကမ္ဘာလူ့သမိုင်း၌လူမျိုးအရေအတွက်သည်ကိန်းသေဖြစ် နေရမည်၊ ပိုခြင်းလျော့ခြင်း လုံးဝမရှိစေရ (သို့မဟုတ်) ရှိမည်မဟုတ်ဟုမည်သူမျှကျိန်းသေမပြောနိုင်ပေ။အချို့သောရှိပြီးသားလူမျိုးများပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သလို၊ အသစ်အသစ်သောလူမျိုးများလည်း ပေါ်လာဦးမည်ဖြစ်သည်။ သေချာသည်ကားဤကိန်းဂဏန်းသည်ပြောင်းလဲနေဦးမည်ဆိုခြင်းပင်တည်း။ဤသည်မှာဓမ္မတာဖြစ်သည်။ “သမိုင်း” တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသောအခြင်းအရာဖြစ်သည်။ဤဖြစ်စဉ်သည်ကမ္ဘာပျက်သည့်တိုင်ဖြစ်နေမည့် “ပရမတ္ထတရား” ဖြစ်သည်။ လူမျိုးအသစ်သစ် များပေါ်လာပေဦးမည်။ ထိုသို့လူမျိုးသစ်ပေါ်လာခြင်းသည်သည် “လုပ်ကြံဖန်တီးခြင်း” မဟုတ်ပေ။သမိုင်းတွင်သူ့အချိန်တန်၍သူဖူးပွင့်လာခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဤလောကသဘာဝတရားကိုလက်မခံဘဲ ကမ္ဘာ့ လူ့သမိုင်းတွင်နောက်ထပ်လူမျိုးသစ်လုံးဝမပေါ်ရ၊ ကမ္ဘာပျက်သည့်တိုင် ဤလူမျိုး (၆၀၀၀) သာရှိရမည် ဟုပြောနေလျှင်အမှန်တရားကိုငြင်းပယ်နေခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ ပထမပေါ်သောလူမျိုးကနည်းနည်း နောက်ကျပေါ်သောလူမျိုးကို “မင်းတို့ကသမိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူး၊ မင်းတို့ဟာကအခုမှလုပ်ကြံဖန်တီးချက်ပါ” ဟူ၍ပြောလျှင်သဘာဝကျမည်မဟုတ်ပါ။ စောစောပေါ်သောပြင်သစ်လူမျိုးကနောက်ကျပေါ်သော အင်္ဂလိပ် လူမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ စောစောပေါ်သောဗမာလူမျိုးကနောက်ကျပေါ်သောကိုးကန့်လူမျိုးကို လည်းကောင်း“အသစ်ဖန်တီးသောလူမျိုး”ဟူ၍စွပ်စွဲခြင်းမလုပ်နိုင်ပေ။ လူမျိုးအားလုံးသည်တပြိုင်တည်း မပေါ်နိုင်သဖြင့်ရှေ့နောက်ဖြစ်၍ပေါ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဗမာ၊ ရခိုင်လူမျိုးများသည် တမူထူးခြားသောအသွင်လက္ခဏာများ (သီးခြားယဉ်ကျေးမှုများ) ရှိလာ၍
မြန်မာ့သမိုင်း၏အမှတ်တစ်နေရာစီတွင်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သလို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသည်လည်းတမူထူးခြားသော အသွင်လက္ခဏာများ (သီးခြားယဉ်ကျေးမှုများ) ရှိလာ၍မြန်မာ့သမိုင်း၏အမှတ်တစ်နေရာတွင်ပေါ်ထွန်းလာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ရခိုင်များကသူတို့ကိုယ်သူလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၅၀၀၀) ခန့်ကသမိုင်းတွင်ဖြစ်တည် လာသည်ဟုဆိုသည်။ သည်အတိုင်းခဏထားပါ။သူတို့အလိုအရဆိုလျှင်ပင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၅၀၀၀) မတိုင်မှီကရခိုင်ဟူသည်သမိုင်းမှာမရှိခဲ့။ ထိုအချိန်ကျမှလူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ရပ်တည်ဖို့အရည်အချင်း ပြည့်စုံ လာ၍သမိုင်းတွင်ဖြစ်တည်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်ထိုအချိန်ကျမှသမိုင်းတွင် မရှိခဲ့ သော “ရခိုင်” လူမျိုးဆိုသည်ကိုဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ရခိုင်မျက်ကန်းများက ရိုဟင်ဂျာများကိုမူ ၁၉၅၁ခုနှစ်လောက်မှသာပေါ်ပေါက်လာသည်ဟုဆိုသည်။ လုပ်ကြံဖန်တီးသောလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟု လည်းအဆင်အခြင်မဲ့စွာမျက်စိမှိတ်ဇွတ်တရွတ်ပြောဆိုလျက်ရှိသည်။ (အမှန်မှာ Francis Buchanan ၏သုတေသနပြုချက်ကိုထောက်လျှင်ရိုဟင်ဂျာရှိနေသည်မှာအချိန်ကာလကြာညောင်းလှပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟု အမည်ပေါက်နေသောဒေသ၏မူလဘူတလူမျိုးများမှာ ယနေ့ရိုဟင်ဂျာများ၏ဘိုးဘေး ဘီဘင်များသာဖြစ်ကြသည်၊ ရခိုင်များမဟုတ်ပါ) ရခိုင်များကရိုဟင်ဂျာများကိုသူတို့ထက်များစွာ နောက်ကျပေါ်ပေါက်ခဲ့၍လက်မခံဟုဆိုနေသည်။ သမိုင်းတွင်လူမျိုးသစ်တစ်မျိုးအချိန်မရွေးပေါ်နိုင်ကြောင်း အထက်တွင်ရှင်းပြပြီးဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ (သို့မဟုတ်) အခြားလူမျိုးသစ်တစ်မျိုးသည် ယနေ့ပင်ပေါ်လာ သည်ဆိုလျှင်ပင်ဆင်ခြင်တုံတရားပြည့်စုံသူများကငြင်းမည်မထင်ပါ။ ပေါ်သင့်ပေါ်ထိုက်၍ပေါ်သည်ဟု ဆိုပေမည်။ သို့သော်ရခိုင်အစွန်းရောက်များကရိုဟင်ဂျာများကိုသူတို့ထက်နောက်ကျပေါ်သည်ဟုအယူရှိ သဖြင့်ငြင်းလျက်ရှိသည်။ ကမန်ဆိုသောလူမျိုးသည်ရခိုင်များထက်များစွာနောက်ကျ၍အေဒီ ၁၆၆၆ ကျော်ကျော်လောက်မှပေါ်ပေါက်လာသောခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ထိုကမန်များကိုရခိုင်များကလုပ်ကြံ ဖန်တီးသောလူမျိုးဟုအဘယ်ကြောင့်မခေါ်သနည်း။ “သက်” လူမျိုးသည်ရခိုင်လူမျိုးသည်ထက်စော၍ ပေါ်သည်ဟုဆိုသည်။ “သက်” ကလည်းရခိုင်ဟူသည်ယခင်ကမရှိ၊နောက်မှလုပ်ကြံဖန်တီးသောလူမျိုး ဟုပြောနေလေသလော။ နောင်လာလတံ္တ့သောခရစ်သက္ကရာဇ် (၂၀၀၀၀) ခုနှစ်တွင်ရခိုင်ဒေသ၌လူမျိုးသစ် တစ်မျိုးပေါ်မည်ဆိုပါစို့။ (မပေါ်နိုင်ဟုမည်သူမျှငြင်းမည်မထင်ပါ)။ သို့ဆိုလျှင်ရခိုင်များကထိုလူမျိုးကို သမိုင်းတွင်မရှိသောလူမျိုး၊ လုပ်ကြံဖန်တီးသောလူမျိုးဟုခေါ်မည်လော။ သို့ဆိုလျှင်လူမျိုးဖြစ်ပေါ်ပုံ သဘောတရားကိုထိုအနှီရခိုင်များကနားမလည်ခြင်းသာဖြစ်သာဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာမရှိကြောင်းဦးခင်ရီတို့ကိုင်ဆွဲထားသောတိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျိုးစာရင်းဆိုသည်မှာအာဏာရှင် ဗိုလ်နေ၀င်းကလိုသူကိုထည့်၊မလိုသူကိုဖြုတ်၍ရေသားထားသောစာရင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလ်ိပ်ခေတ် ကသန်းခေါင်စာရင်းဆိုသည်မှာလည်း “ရခိုင်” ကို “မောဂ်” ၊ “ရိုဟင်ဂျာ” ကို “မဟာမေဒင်” ဟူ၍သူတို့ နားလည်သလိုရေးမှတ်ခဲ့သောစာများသာဖြစ်သည်။ ဘုရားဟောဗျာဒိတ်များမဟုတ်ချေ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင်၊ ဗမာ စသောလူမျိုးများသည်မြန်မာ့သမိုင်း၏ အမှတ်တစ်နေရာ စီတွင်ပေါ်သင့်၍ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောလူမျိုးများဖြစ်သည်။ ဤသို့ရှိပါလျက်မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မရှိဟုဆိုလျှင်ထိုမြန်မာ့သမိုင်း၌ရခိုင်လူမျိုး၊ဗမာလူမျိုးဟူ၍လည်း ရှိမည်မဟုတ်ပေ။
This entry was posted on January 1, 2013, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မောင်တောမြို့ တောင်ဖက်ပိုင်းဒေသ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ရှားပါးသတ္တုများ တွေ့ရှိ
ဘီလူးစီးခြင်း (Sleep Paralysis) (ကျန်းမာရေး သုတ) →